ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ကို တစ်ချိန်တုန်းက အမှတ်ရပုံလေးနဲ့အတူ ထူးထူးခြားခြားလေး ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော် ကြာစိရဲ့ဇနီး –7Day Daily News
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ဇာတ်သဘင်လောကမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့5stars လူရွှင်တော်အဖွဲ့ဝင်မှ လူရျွင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကြာစီကတော့ မရိုးနိုင်တဲ့ဟာသပြက်လုံးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုရယ်မောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဆောင်နိင်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို တစ်ခဲနက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီကနေ့ဟာဆိုရင် လူရွှင်တော်ကြာစိရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်တာကြောင့်ချစ်ရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတစ်ချိန်ကအမှတ်တရပုံတွေနဲ့အတူ “ပျာ်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေဦးစိတ်ကောက်ရေ……….အသက်လည်းကြီးပြီအဘိုးကြီးလည်းဖြစ်ပြီကောက်တာလေးလျော့…….မချစ်ဘူးဆိုတာ ချစ်လို့ပြောတာဒါလေးလည်း ဒီအရွယ်ရောက်ပြီသိသင့်ပြီထင်ပါတယ်နော်…….
မွေးနေ့မှစ အောင်မြင်ခြင်းအေးချမ်းခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းများမဆုံးအောင်ရရှိပြီး ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒစိတ်ရှိတိုင်းပြည့်ဝပြီး ရန်စွယ်ဟူသမျှအနိုင်ရပြီး ဘဝတံခွန် အောင်လံလွှင့်ထူနိူင်သူဖြစ်ပါစေ…….” ဆိုပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ကြာစိရဲ့မွေးနေ့လေးကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါအုံးနော်….။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကေျးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ….ဇာတ္သဘင္ေလာကမွာ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့5stars လူ႐ႊင္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မွ လူရြၽင္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ၾကာစီကေတာ့ မရိုးနိုင္တဲ့ဟာသျပက္လုံးေတြနဲ႕ပရိသတ္ေတြကိုရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိင္တဲ့အတြက္ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို တစ္ခဲနက္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီကေန႕ဟာဆိုရင္ လူ႐ႊင္ေတာ္ၾကာစိရဲ႕ေမြးေန႕ေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ခ်စ္ရတဲ့ဇနီးျဖစ္သူကတစ္ခ်ိန္ကအမွတ္တရပုံေတြနဲ႕အတူ “ပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေမြးေန႕ေလးပိုင္ဆိုင္ပါေစဦးစိတ္ေကာက္ေရ……….အသက္လည္းႀကီးၿပီအဘိုးႀကီးလည္းျဖစ္ၿပီေကာက္တာေလးေလ်ာ့…….မခ်စ္ဘူးဆိုတာ ခ်စ္လို႔ေျပာတာဒါေလးလည္း ဒီအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီသိသင့္ၿပီထင္ပါတယ္ေနာ္…….
ေမြးေန႕မွစ ေအာင္ျမင္ျခင္းေအးခ်မ္းျခင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းမ်ားမဆုံးေအာင္ရရွိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵစိတ္ရွိတိုင္းျပည့္ဝၿပီး ရန္စြယ္ဟူသမွ်အနိုင္ရၿပီး ဘဝတံခြန္ ေအာင္လံလႊင့္ထူနိူင္သူျဖစ္ပါေစ…….” ဆိုၿပီးေမြးေန႕ဆုေတာင္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ပရိတ္သတ္ႀကီးကလည္း ၾကာစိရဲ႕ေမြးေန႕ေလးကို ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့ပါအုံးေနာ္….။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္။